Guardiola oo sii go’aamiyay badalka kabtankii kooxda Manchester City ee Vincent Kompany – Gool FM
(Manchester) 20 Maajo 2019. Tababaraha reer Spain ee Pep Guardiola ayaa sii go’aamiyay badalka kabtankii hore kooxda Manchester City ee Vincent Kompany, si ay ugu diyaar garoobaan saxiixiisa suuqa xagaaga ee soo socda.
Vincent Kompany ayaa ku dhawaaqay inuu ka tagayo garoonka Etihad, 33-sano jirkaan ayaana ogolaaday inuu kooxdiisii hore ee Anderlecht ka noqdo ciyaaryahan iyo macallin cusub.
Hadaba wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa wuxuu maanta oo isniin ah sheegay in Guardiola uu isha ku hayo daafaca kooxda Leicester City ee Harry Maguire, si uu ugu noqdo badalka Vincent Kompany xili ciyaareedka cusub.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in daafaca reer England oo haatan da’adiisu tahay 26 jir uu bar-tilmaameed buuxa u noqday macalinka reer Spain iyo kooxda Man Citty ee Pep Guardiola, kaddib marka uu furmo suuqa xagaaga.
Yeelkadeeda, qiimaha lagu iibsan karo haatan daafaca kooxda Leicester City ee Harry Maguire ayaa lagu soo waramayaa inuu sare u dhaafayo aduun dhan 85 milyan oo euros.
“Waxaad arki doontaan Real Madrid oo xoogan xilli ciyaareedka soo socda” - Kroos oo dhiirrigeliyay taageerayaasha Los Blancos